Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Izinga leengozi laseHawaii COVID-19 lisuka Phezulu liye kweliphakathi
zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • I-HITA • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Kamainas • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
The Aloha Izwe laseHawaii selisukile engcupheni ephezulu laya engcupheni ephakathi naphakathi ohlwini lweCovid Act Now.
Amacala e-COVID-19 aseHawaii, ukulaliswa esibhedlela nokushona aye ancipha ngenyanga edlule.
Umbuso ufinyelele ekuvikeleni umhlambi ngokugoma okuhlobene nabantu abathole okungenani umthamo owodwa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
UMbusi waseHawaii uDavid Ige usancoma ukuthi ukuvakasha kukhawulelwe ohambweni olubonakala ludingeka.
ICovid Act Manje ihlinzeka ngemiphumela yobungozi obuyi-5 ezifundazweni nasezifundeni esizweni sonke ukuze izakhamizi nezikhulu zikahulumeni ziqonde kangcono isimo se-COVID endaweni yazo. I-Act Now Coalition iyinhlangano ezingenzi nzuzo engama-501 (c) (3) ezimele esungulwe amavolontiya ngoMashi 2020. ICovid Act Manje uhlelo olubhekiswe ku-COVID lokusiza abantu benze izinqumo ezinolwazi ngokunikela ngemininingwane efike ngesikhathi nenembile nge-COVID e-US
Ezinsukwini eziyi-30 ezedlule, Inani lamacala, ukulaliswa esibhedlela nokufa kwabantu kuye kwancipha. Isifunda saseHonolulu, eHawaii, sibike ukuthi sinemibhede yabantu abadala eyi-156 yabantu abadala base-ICU. Ezingama-86 zigcwaliswa yiziguli ezingezona eze-COVID kanti ezingama-33 zigcwaliswa yiziguli ze-COVID. Sekukonke, kugcwalisiwe i-119 kwayi-156 (76%). Lokhu kuphakamisa ikhono elithile lokuthola ukwanda kwamacala e-COVID.
Umbuso ufinyelele ekuvikeleni umhlambi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngenani lokugoma lama-73.9% wabantu abathola okungenani umthamo owodwa. Esifundeni saseHonolulu, eHawaii, abantu abangama-720,162 (73.9%) bathole okungenani umthamo owodwa kanti abangu-647,576 (66.4%) bagonywe ngokuphelele. Noma ngubani okungenani oneminyaka engu-12 ubudala ufanelekile ukugoma. Ngaphansi kuka-0.001% wabantu abathole umthamo bathola ukusabela okubi kakhulu.
Ngokwesilinganiso, izinga lokutheleleka eziqhingini liku-69% ngezinga lokuhlolwa elingu-3%. Njengamanje kunamacala amasha angu-7.3 abikiwe kwabangu-100,000.
Isifunda saseHonolulu, eHawaii, sinobungozi obuphansi kunezifunda eziningi zase-US. Imiphakathi enobungozi obuphakeme inezimo zomnotho, zenhlalo, nezomzimba ezivele zingenza kube nzima ukuphendula futhi zilulame ekuqubukeni kwe-COVID.
Ukuhamba kusamele kugwenywe ngaphandle uma kunesidingo, noma abahambi bagonywe ngokuphelele.
Amaski anconyelwa abantu abagonyiwe ezindaweni zomphakathi zasendlini ukunciphisa ukusabalala kokwehlukile kweDelta. Abantu abangagonyiwe kufanele baqhubeke nokuzifihla kuzo zonke izikhala zomphakathi.
Imibuthano yangaphakathi kufanele igwenywe nabantu abangaphandle kwekhaya, ngaphandle kwalapho begonywe ngokuphelele.
Izikole zinganikela ngokuphepha ngaphakathi kokufunda kuphela uma lezi zindlela zokulawula ukutheleleka sezikhona.